January2019 – hoo!haa!!
IJIPT: Ụlọikpe nọ na mba Ijipt atụọla onye nta akụkọ na-arụ n’ụlọọrụ mgbasa ozi televishọnụ nga otu afọ maka ịgba akwụla nwoke na-edina ụmụ nwoke ajụjụ ọnụ n’oge mmemme ya. Mohammed el-Gheiti bụ onye ụlọikpe sịrị na ọ dara iwu site na ịkwado arụrụ ala maka mmemme ya nke eRead More →
Ọka: Ụlọọrụ ndi uwe ojii n’Anamabra Steeti ekwuputala ka izu ịba ụmụ nwanyị na-ewuzi na steeti ahụ ugbua si emetụ ha n’ahụ. Ha rịọkwara ka onye ọbụla mụrụ anya dịka azụ maka na oke anaghi eri ihe onye mụ anya. Ọnụ na-ekwuru ndi uwe ojii na steeti ahụ bụ MazịRead More →
ARỌCHUKWU: Ọgbaghara dapụtara n’Ihechiọwa dị n’Okpuru Ọchịchị Arọchukwu n’Abịa Steeti ụnyahụ mgbe ndi ntorọbịa obodo ahụ nọchiri onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ APC azọ ọkwa Sineti ma bụrụkwa Gọvanọ chịburu Abịa Steeti bụ Dọkịnta Ọjị Ụzọ Kalụ mgbe ọ bịara ịchụ nta nkwado ebe ahụ. Site n’ozi anyị nwetara,Read More →
Nwa-ada Khadija Ben Hamou, onye nke tuuru ugo dịka Nwa-ada Ọljiriya nke afọ 2019 ụbọchị Satọdee gara aga akatọọla ndi na-akparị ya maka na ọ bụ onye isi ojii. “A gaghị eji maka ndi na-akatọ m were daa mba” Khadịja gwara ndi nta akụkọ. Ime akaja maka ịdị oji, udiriRead More →